Ngaba uMjikelo omnye weSteroids uza kukwenzakalisa-iBikeHike
Ngaba i-steroids inokusetyenziswa ngokukhuselekileyo?
Kuthatha ixesha elingakanani ukubuyela kumjikelezo we-steroid?
Ngaba ungahlala kwi-steroids ngonaphakade?
Ngaba i-creatine ilungile njenge-steroids?
Ngaba i-masturbating iyanciphisa i-testosterone?
Ngaba i-hCG iya kwandisa ubungakanani besende?
Ngaba i-testosterone yam iya kubuya?
Yeyiphi eyona nto isemthethweni kwi-steroids?
Uwuthatha njani umjikelo wakho wokuqala we-steroid?
Ngaba i-steroids yenza ukuba uguge ngokukhawuleza?
Unokusebenzisa ixesha elingakanani i-steroids ngokukhuselekileyo?
Ingakanani isteroid ekhuselekileyo?
Kutheni i-creatine ingalunganga kuwe?
Ngaba i-creatine ikhuselekile kubantu abaneminyaka eyi-16?
Ngaba unguNatty kwi-creatine?
Ngaba kukho idosi ekhuselekileyo ye-anabolic steroids? Akukho dosi 'ekhuselekileyo' ye-anabolic steroid. Ukuba uqhubeka usebenzisa i-steroids, ngaphandle kwezilumkiso zempilo kunye neengcebiso zoogqirha bakho, nangona kunjalo, gcina umthamo ubuncinci kwaye uthathe ikhefu ekusebenziseni i-steroids.
Ukuhoxiswa kwi-anabolic steroids Kungathatha ukuya kwiinyanga ze-4 ukubuyisela amanqanaba e-testosterone yendalo emva kokuba kwi-anabolic steroids ixesha elide. Iimpawu zokurhoxisa kwi-steroids zingabandakanya: ukukhathala.
AWUFUNEKA uyeke ngokwakho nokuba uziva ungcono. Ukuba usebenzisa i-steroids ngaphezu kweeveki ezimbalwa (okanye iveki kwimeko ye-prednisone 40 mg ngosuku okanye ngaphezulu) kuya kufuneka ukuba unciphise umthamo ngaphambi kokuba uyeke ngokupheleleyo.
I-Creatine kunye ne-anabolic steroids yinto enye Ubuxoki! I-Creatine ayinanto yakwenza ne-anabolic steroids, efana okanye exelisa i-testosterone ukukhuthaza ukukhula kwemisipha kunye nokuphucula ukusebenza komzimba. I-Creatine inika izihlunu zakho amandla angaphezulu, okanye ibancede bayivelise.
Abantu abaninzi bakholelwa ukuba ukuphulula amalungu esini kuchaphazela amanqanaba e-testosterone yendoda, kodwa oku akuyonyani. I-masturbation ayibonakali nayiphi na imiphumo ehlala ixesha elide kumanqanaba e testosterone.
Bachaza ukuba unyango lwe-hCG lunyuse umthamo we-testicular ukusuka kwi-5.5 (unyango lwangaphambili) ukuya kwi-10.8 mL (ubuninzi) ngexesha lonyango kwaye onke amadoda afumene amanqanaba aqhelekileyo e-serum testosterone emva konyango lwe-hCG. Ngethuba lokunyangwa kwe-hCG, i-14 yamadoda angama-22 yayinokubonakala kwe-sperm enhle kwi-semen yabo.
Unyango lwe testosterone ephantsi yinkqubo eqhubekayo kwaye ngokuqhelekileyo iya kuqhubeka ixesha elide. Njengezinye iimeko ezininzi ezingapheliyo, ukuba uyeka unyango, ingxaki iyabuya-amanqanaba akho e testosterone aya kuhla abuyele kumanqanaba angaphantsi kwesiqhelo.
Izongezo ze-Steroid ezisemthethweni eziPhezulu: Uluhlu lwe-#1 D-Bal Max: Enye indlela ukuya kwi-Dianabol kunye neNgcono eNgcono xa iyonke yeSteroid Alternative. #2 Testo-Max: Enye indlela yeSustanon. #3 HyperGH 14X: Enye indlela yokuTofwa kweHGH. #4 Clenbutrol: Enye indlela Clenbuterol. #5 Winsol: Enye indlela kwiWinstrol.
Ekuqaleni komjikelo, umntu uqala ngeedosi ezisezantsi ezipakishwayo aze anyuse kancinci amayeza. Kwisiqingatha sesibini somjikelo, iidosi ziye zinciphe kancinci ziye ku-zero. Ngamanye amaxesha oku kulandelwa ngumjikelo wesibini apho umntu aqhubeka eziqeqesha kodwa ngaphandle kweziyobisi.
Ukusebenzisa kakubi i-anabolic steroids nako kunokudodobalisa ukukhula kolutsha. Iisteroids zinokubangela ukuguga kwangaphambi kwexesha kwamathambo.
Ukusetyenziswa kwe-steroid ngaphezulu kweeveki ezimbini kunokunciphisa amandla omzimba wakho ukuphendula kuxinzelelo lomzimba. Idosi ephezulu ye-steroid inokufuneka ngamaxesha oxinzelelo olukhulu, njengotyando okanye umsebenzi obanzi kakhulu wamazinyo okanye usulelo olubi. Oku kunokufuneka ixesha elide emva kokuba uyekile i-steroids.
Ngaphantsi kwe-7.5 mg ngosuku ngokuqhelekileyo ithathwa njengedosi ephantsi; ukuya kuthi ga kwi-40 mg imihla ngemihla yi-dose ephakathi; kwaye ngaphezu kwe-40-mg imihla ngemihla yi-dose ephezulu. Ngamanye amaxesha, iidosi ezinkulu kakhulu ze-steroids zinokunikwa ixesha elifutshane.
Ngokuxhomekeke ekubeni ubuza bani, iziphumo ebezingalindelekanga ezicetyisiweyo zecreatine zinokubandakanya: Ukonakala kwezintso. Umonakalo wesibindi. Amatye ezintso.
Zombini i-American Academy of Pediatrics kunye ne-American College of Sports Medicine bayavumelana ukuba abakwishumi elivisayo akufanele basebenzise izongezo zokuphucula ukusebenza, kubandakanya i-creatine. Thetha nomdlali wakho ofikisayo ngayo.
Awuyena wendalo / unatty ukuba uthatha iiProtein Powders, Creatine, Pre-Workout, SARMS, ROIDS, njl.
Ngaba uMjikelo omnye weSteroids unokukwenzakalisa
Impendulo eKhawulezayo: Ngaba uMjikelo omnye weTestosterone uyakukulimaza
Umbuzo: UziBhayisela njani iiSteroids
Ngaba i-Steroids inokuchaphazela uMjikelo wokuya exesheni
UziBhayisela njani iiSteroids ngokuKhuselekileyo
Ixesha elide kangakanani i-Testosterone Cycle
Impendulo eKhawulezayo: Indlela yokuBhayisha iTestosterone
Inde kangakanani iSteroid Cycle
Umbuzo: UziBhayisela njani i-Testosterone Boosters